प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-५
दिनेश गौतम काठमाडौं, १७ साउन
कक्षा ११ र १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य ’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जसअन्तर्गत आज हामीले ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन (BCA)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीसीए ?
ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन (BCA)मा कम्प्युटरको एप्लिकेसन डिजाइन गर्न सिकाइन्छ । कम्प्युटर (हार्डवेयर) भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चलाउन विभिन्न एप्लिकेसन आवश्यक पर्छ । कम्प्युटरलाई सरल र सहज रूपमा चलाउन एप्लिकेसन आवश्यक पर्छ । बीसीएले त्यो एप्लिकेसन बनाउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्छ । बीसीएअन्तर्गत Word processing software, Desktop Software, Internet Browsers, Email Programs आदिको एप्लिकेसन बनाउन सिकाइन्छ ।
यो चार वर्षे कोर्स हो । यसमा ८ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । बीसीए आईटीसम्बन्धी कोर्स भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसलाई मानविकी संकायमा समावेश गरेको छ । अन्य विश्वविद्यालयले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी संकायमा समावेश गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न क्याम्पसले बीसीए कोर्स सञ्चालन गरेका छन् ।
ककसले पढ्न पाउँछन् ?
प्लस टुमा जीपीए २.० वा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकोले
विश्वविद्यालयले लिने ‘इन्ट्रान्स परीक्षा’मा ४० प्रतिशत ल्याएकाले
बीसीए किन पढ्ने ?
नयाँ एप्लिकेसन बनाउन
आईटीबारे अनुसन्धान गर्न
कुन क्षेत्रमा अवसर पाइन्छ ?
आईटी उद्योग (सरकारी र निजी)
एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट कम्पनी
नयाँ प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने
ग्राफिक्स डिजाइन गर्ने
कुन कुन विषय पढ्नुपर्छ ?
ग्राफिक्स एन्ड एनिमेसन
यो कोर्स पढ्न कम्तीमा ४ देखि ८ लाखसम्म खर्च लाग्छ । तर, सरकारी र निजी क्याम्पसमा शुल्क फरक फरक हुन्छ । क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर, यति विद्यार्थीलाई नै निःशुल्क पढाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले क्याम्पसले आफ्नो क्षमताअनुसार छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । ३५ जनाको मात्र कोटा भएकाले क्याम्पसले विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था हेरेर छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । अन्य संघसंस्थाले पनि छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।
यो आईटीसम्बन्धी कोर्स भएकाले कम्तीमा तीन महिना कुनै पनि आईटी कम्पनीमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य बनाउनुपर्छ । एप्लिकेसन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा इन्टर्नसिप गर्दा सिक्न सकिन्छ । कम्पनीले इन्टर्नसिपमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई रोजगार दिन सक्छ ।
काठमाडौं मोडेल कलेज, बागबजार, काठमाडाैं
टेक्सास क्याम्पस, चावहिल, काठमाडौं
नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज, पक्नाजाेल, काठमाडाैं
आदिम नेसनल कलेज, चावहिल, काठमाडौं
सगरमाथा क्याम्पस, सानेपा, ललितपुर
एसियन कलेज अफ हायर स्टडिज, धोबीधारा, काठमाडौं
अरनिको मल्टिपल क्याम्पस, सातदोबाटो, ललितपुर
नागर्जुना कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, पुल्चोक, ललितपुर
नेपाल मेगा कलेज, बबरमहल, काठामाडौं
अर्किड इन्टरनेसनल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौं
एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, गोंगबु, काठमाडौं
सामाजिक कलेज, लोकन्थली, भक्तपुर
कलेज अफ एप्लाइड बिजनेस, धोबीखोला, काठमाडौं
एकेडेमिया इन्टरनेसनल कलेज, ग्वार्को चोक, ललितपुर
लुम्बिनी कलेज, चावगहिल, काठमाडौं
न्यु समिट कलेज, तिनकुने, काठमाडौं
नेपालय कलेज, कलंकी, काठमाडौं
सीसीआरसी, बालकुमारी, काठमाडौं
स्वस्तिक कलेज, थिमी, भक्तपुर
कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल क्याम्पस, बालकुमारी, ललितपुर
समृद्धि कलेज, भक्तपुर
थेम्स क्याम्पस, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
के एन्ड के कलेज, नयाँ बानेश्वर
साउथ वेस्टर्न कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
पाटन निस्था क्याम्पस, ललितपुर
अरुणिमा कलेज, बौद्ध, काठमाडौं
सेन्ट लयरेन्स कलेज, चावहिल, काठामाडौं
युनाइटेड कलेज, कुमारीपाटी, ललितपुर
रिलायन्स कलेज, चावहिल, काठमाडौं
डीएभी कलेज, जाउलाखेल, ललितपुर
नेसनल कलेज, वनस्थली, काठमाडौं
पाटन मल्टिपल क्याम्पस, पाटन, ललितपुर
एभेस्ट इन्टरनेसनल कलेज, सोल्टिमोड, काठमाडौं
जीपी कोइराला मेमोरियल कलेज, सिफल, काठमाडौं
जनभावना क्याम्पस, प्योङगाउँ, ललितपुर
जया मल्टिपल क्याम्पस,जोरपाटी, काठमाडौं
मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं
अम्बिकेश्वरी कलेज, दाङ
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर, मोरङ
कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ, तीनकुने, काठमाडौं
हिमालयन ह्वाइटहाउस, पुतलीसडक, काठमाडौं
नेपाल कलेज अफ इनफर्मेसन टेक्नोलोजी, बालकुमारी, ललितपुर
सिटिजन कलेज, सातदोबाटो, ललितपुर
क्रिमसन कलेज, रूपन्देही
अक्सफोर्ड कलेज, नवलपरासी
राप्ति इन्जिनियर कलेज, दाङ
नेपालमै आईटी कम्पनीमा काम गर्दा सुरुवातमा कम्तीमा मासिक ५० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ । पछि आफ्नो अनुभव र क्षमताका आधारमा तलब बढ्दै जान्छ ।
धेरै विद्यार्थीको गन्तव्य विदेश हुन्छ । मास्टर्स गर्न पनि विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । बीसीए पढेका नेपाली विद्यार्थी पढ्न, काम गर्न र नयाँ एप्लिकेसनको अनुसन्धान गर्न युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पुग्छन् ।
बीसीएको महत्त्व के छ ?
एप्लिकेसन बनाउने जनशक्ति उत्पादन
ललन तिवारी, प्रधानाध्यापक, ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज
नेपालमा वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसलाई मध्यनजर गरेर बीसीए कोर्स बनाइएको हो । प्रत्येक कार्यालय र घरमा कम्प्युटर पुगेको छ । तर, कम्प्युटर भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चलाउन एप्लिकेसन आवश्यक पर्छ त्यसैले कम्प्युटरका लागि चाहिने एप्लिकेसन बनाउने जनशक्ति आवश्यक भएकाले बीसीएको महत्त्व व्यापक छ ।
विश्वलाई टेक्नोलोजीले नजिक बनाएको छ
सुवास कार्की, आईटी प्रमुख, क्याथफोर्ड कलेज
नेपालले पनि प्रविधिमा फड्को मार्दै छ । रिमोर्टबाट पानी खोल्ने, बत्ती बाल्ने–निभाउने, फ्रिज खोल्ने तथा बन्द गर्ने जस्ता प्रविधिको विकास भएको छ । यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रविधिको खोजी भइरहेको छ । विश्वलाई टेक्नोलोजीले नै नजिक बनाएको छ।
हामी मोबाइल खोल्नेबित्तिकै इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वमा कहाँ के भएको छ, हेर्न सक्छौं । टाढा टाढा रहेकालाई पनि प्रविधिले नजिकै ल्याएको छ । अहिले जुनसुकै अफिसमा कम्प्युटरको माध्यमबाट काम हुन थालेको छ । हो, यस्ता कामलाई चाहिने एप्लिकेसन बनाउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि बीसीए कोर्स आवश्यक छ ।
आईटीबिना देशको विकास सम्भव छैन
बृहतसिंह बसवा, कार्यक्रम निर्देशक, एसियन कलेज अफ हायर स्टडिज्
आईटीबिना देशको विकास सम्भव छैन । देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भनेकै आईटी प्रयोग गरेर नै हो । विश्वमा जति पनि देश समृद्ध छन्, ती देशमा आईटीको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ । आईटीबिना अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन त्यसैले नेपालमा बीसीए कोर्स आवश्यक भएको हो । हरेक क्षेत्रमा दक्ष आईटी अफिसर आवश्यक छ । टेक्नोलोजीलाई प्रयोग नगर्ने हो भने हामी धेरै पछि पर्नेछौं त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बीसीए कोर्स आजको आवश्यकता हो ।
बीसीए पढेर नाम दाम कमाउन सकिन्छ
शरद पोखरेल : म्यानेजर आईटी
लगनशील भएर कडा मेहनत गर्ने हो भने नाम र दाम कमाउन गाह्रो छैन । बीसीए पढेर नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसको उदाहरण हुन्, दाङका शरद पोखरेल । ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेका पोखरेल सिभिल इन्जिनियर बन्न चाहन्थे । घरायसी कारणले उनी इन्जिनियर बन्न सकेनन् । अक्सफोर्डबाट उनले बीसीए पढे । उनले बीसीएमै मास्टर्स गरे । हाल उनी नेपाल बैंक लिमिटेड आईटी म्यानेजरका रूपमा कार्यरत छन् ।
‘आईटी पढेर पनि राम्रो भएको छ । एक–दुई लाख कमाउन विदेश जानुपर्दैन । नेपालमै कमाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एप्लिकेसन आवश्यक
माधव सुवेदी : आईटी कम्पनीका इन्जिनियर
नेपालमा पनि आईटी कम्पनी खुलेका छन् । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एप्लिकेसन आवश्यक छ । दिनदिनै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आएका छन् त्यसैले नेपालमा पनि आईटी क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच माधव सुवेदीमा पलायो । उनले केसीसीबाट बीसीए पढे । ‘पहिलेदेखि नै आईटीमा रुचि थियो त्यसैले बीसीए कोर्स पढें,’ उनले भने । मास्टर्स पनि यसैमा गरेपछि अहिले उनी आईटी कम्पनीमा जागिरे छन् ।
आईटी कम्पनीमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन
सरोज पाण्डे : विभागीय प्रमुख, केसीसी क्याम्पस
बीसीए पढेपछि आईटी कम्पनीमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मास्टर्स गरेर क्याम्पसमा पढाउन पनि सकिन्छ । सरोज पाण्डे क्याम्पसमा पढाउँछन् । केसीसीबाट मास्टर्स गरेपछि अहिले उनी त्यही क्याम्पसमा पढाउँछन् । ‘यो कोर्स गरेपछि आईटी कम्पनीमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ ।’
अन्त्यमा, टेक्नोलोजीले फड्को मारेका देश आर्थिक रुपमा समृद्ध छन् । नेपाल सरकारले पनि हरेक कार्यालयको कामकाज कम्प्युटरको माध्यमबाट गर्न सुरु गरेको छ । ती कार्यालयका लागि दक्ष आईटी अफिसर आवश्यक छ । निजी कम्पनी, बैंक र सहकारी संघसंस्था आईटीबिना चलाउन मुस्किल छ त्यसैले ती कार्यालयमा चाहिने दक्ष आईटी अफिसर उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६, १९:३०:००